ဘာစီလိုနာ သတင်းတိုများ - Sports Myanmar
​ရော်​နယ်​ဒို မက်​ဆီ ဘယ်​သူ အ​ကောင်းဆုံးဖြစ်​မလဲ?
ဖာဘရီဂတ်​:> မက်​ဆီ နှင့်​ ​ရော်​နယ်​ဒို တို့ က တစ်​နှစ်​ထက်​တစ်​နှစ်​ပိုပြီး တိုးတက်​ လာတာ​တွေ့​နေရတယ်​။ နှစ်​​​ယောက်​လုံး က ​အောင်​မြင်​မူအတွက်​ ဆာ​လောင်​​နေတဲ့သူ​တွေပါ။ သူတို့နှစ်​​ယောက်​ လုပ်​ပြနိုင်​တာ​​တွေ မယုံနိင်​စရာ​တွေ ကြီးပါ။ ကျ​နော့်​အမြင်​အရ​တော့ နှစ်​​ယောက်​စလုံး ​နှစ်​အ​တော်​ကြာ အတူယှဉ်​တွဲ နိူင်းယှဉ်ပြီး ​အောင်​မြင်​ မူ​တွေ ယူပြ​နေတာ ကို ​လေးစားမိပါတယ်​။
အ​ကောင်းဆုံး က​တော့ သူတိူ့ နှစ်​​ယောက်​ကို နိုင်းယှဉ်​​နေမယ့်​ အစား သူတို့ နှစ်​​ယောက်​စလုံးနှင့်​အတူ ​အောင်​မြင်​မှု ​တွေ ကစားသမားဘဝ မှာ အတူမျှ​ဝေ ခံစား​ပေးနိုင်​ဖို့ အဓိကပါပဲ ။
ပြင်​သစ်​ကလာတဲ့ သတင်းများ အရ ဂရစ်​ဇ်​မန်း ဟာ အက်​သလက်​တီကိုအသင်းရဲ့ စာချူ ပ်​ကမ်းလှမ်း မူ ကို ငြင်းဆန်​ ထားတယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ ထို ​အ​ခြေအ​နေဟာ ဘာစီလိုနာအသင်း အတွက်​ မီးစိမ်းပြ လိုက်​ပြီဖြစ်​သလို ယခင်​ကထွက်​​ပေါ်ခဲ့တဲ့ သတင်းများအရ ကစားသမား နှင့်​ ပုဂ္ဂိုလ်​​ရေးအရ အကြိုသ​ဘောတူညီမူ ရရှိထားတယ်​လို့သိရပါတယ်​။
အာဆင်​နယ်​အသင်း ဟာ ဘယ်​လာရင်​အတွက်​ ​ပေါင်​သန်း၅၀ဖြင့်​ ​ရောင်းချဖို့ ဆန္ဒ ရှိ​နေပါတယ်​။ မန်​စီးတီး ဂျူ ဗင်​တပ်​ အသင်းတို့ကလည်း ဘယ်​ လာရင်​ကို စိတ်​ဝင်​စား​နေပြီး ဘာစီလိုနာအသင်း ကလည်း ပြန်​လည်​ကမ်းလှမ်း လာနိုင်​တယ်​လို့သိရပါတယ်​။
တရုတ်​စူပါလိဂ်​ကလပ်​ Tianjin Quanjianအသင်းဟာ အသင်း​ခေါင်း​ဆောင်​ အင်​နီ​ယေစတာ ကို ​ခေါ်ယူရန်​သတင်းများထွက်​​နေမူ ကို ငြင်းဆိုသွား ခဲ့ပါတယ်​။သတင်းအမှား​တွေလို့ အတည်​ပြု ​ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အသင်း​ခေါင်း​ဆောင်​ အင်​နီ​ယေစတာ ဟာ ချဲလ်​ဆီး အသင်းနှင့်​ ယှဉ်​ပြိုင်​မယ့်​ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ပွဲစဉ်​ကို ပြန်​လည်​ပါဝင်​နိုင်​​ခြေရှိ​နေပါတယ်​။ အသင်းနှင့်​အတူ ပြန်​လည်​ပူး​ပေါင်း ​လေ့ကျင့်​​နေတယ်​လို့သိရပါတယ်​။ကြံခိုင်​မူပြည့်​ဝမူ ရှိမရှိ​ကို​တော့ထုတ်​ပြန်​ထားခြင်း မရှိ​သေးပါဘူး။
ဘရာဇီး ကစားသမား​တွေဖြစ်​တဲ့ ​ကော်​တင်​ဟို ဟာ ပီအက်​ဂျီ တ်ိုက်​စစ်​မူး ​နေမာ အ​နေနဲ ဘာကာ ကို ပြန်​လည်​ကစားမည်​ဆိုပါက ကြိုဆို​ကြောင်း​ပြောကြားဆိုခဲ့ပါတယ်​။ရာကီတစ်​ကလည်း ​နေမာအတွက်​ အမြဲလမ်းဖွင့်​ထားတယ်​လို့​ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်​။
ဘာစီလိုနာအသင်း ​နောက်​ခံလူ ပီ​ကေး ဟာ လာမယ့်​ ခ်ျ​လ်​ဆီးအသင်းနှင့်​ ပွဲစဉ်​ဟာ သူ့ ရဲ့ ဥ​ရောပပြိုင်​ပွဲ​ပေါင်း၁၀၀ပြည့်​မြောက်​မယ့်​ပွဲစဉ်​ဖြစ်​တာမို့ သူ့ အအတွက်​ အမှတ်​တရ ​တွေ ရယူနိုင်​မလား​စောင့်​ကြည့်​ရ​တော့မှာပါ။
​ရျော​နယျ​ဒို မကျ​ဆီ ဘယျ​သူ အ​ကောငျးဆုံးဖွဈ​မလဲ?
ဖာဘရီဂတျ​:> မကျ​ဆီ နှငျ့​ ​ရျော​နယျ​ဒို တို့ က တဈ​နှဈ​ထကျ​တဈ​နှဈ​ပိုပွီး တိုးတကျ​ လာတာ​တှေ့​နရေတယျ​။ နှဈ​​​ယောကျ​လုံး က ​အောငျ​မွငျ​မူအတှကျ​ ဆာ​လောငျ​​နတေဲ့သူ​တှပေါ။ သူတို့နှဈ​​ယောကျ​ လုပျ​ပွနိုငျ​တာ​​တှေ မယုံနိငျ​စရာ​တှေ ကွီးပါ။ ကြ​နျော့​အမွငျ​အရ​တော့ နှဈ​​ယောကျ​စလုံး ​နှဈ​အ​တျော​ကွာ အတူယှဉျ​တှဲ နိူငျးယှဉျပွီး ​အောငျ​မွငျ​ မူ​တှေ ယူပွ​နတော ကို ​လေးစားမိပါတယျ​။
အ​ကောငျးဆုံး က​တော့ သူတိူ့ နှဈ​​ယောကျ​ကို နိုငျးယှဉျ​​နမေယျ့​ အစား သူတို့ နှဈ​​ယောကျ​စလုံးနှငျ့​အတူ ​အောငျ​မွငျ​မှု ​တှေ ကစားသမားဘဝ မှာ အတူမြှ​ဝေ ခံစား​ပေးနိုငျ​ဖို့ အဓိကပါပဲ ။
ပွငျ​သဈ​ကလာတဲ့ သတငျးမြား အရ ဂရဈ​ဇျ​မနျး ဟာ အကျ​သလကျ​တီကိုအသငျးရဲ့ စာခြူ ပျ​ကမျးလှမျး မူ ကို ငွငျးဆနျ​ ထားတယျ​လို့ သိရပါတယျ​။ ထို ​အ​ခွအေ​နဟော ဘာစီလိုနာအသငျး အတှကျ​ မီးစိမျးပွ လိုကျ​ပွီဖွဈ​သလို ယခငျ​ကထှကျ​​ပျေါခဲ့တဲ့ သတငျးမြားအရ ကစားသမား နှငျ့​ ပုဂ်ဂိုလျ​​ရေးအရ အကွိုသ​ဘောတူညီမူ ရရှိထားတယျ​လို့သိရပါတယျ​။
အာဆငျ​နယျ​အသငျး ဟာ ဘယျ​လာရငျ​အတှကျ​ ​ပေါငျ​သနျး၅၀ဖွငျ့​ ​ရောငျးခဖြို့ ဆန်ဒ ရှိ​နပေါတယျ​။ မနျ​စီးတီး ဂြူ ဗငျ​တပျ​ အသငျးတို့ကလညျး ဘယျ​ လာရငျ​ကို စိတျ​ဝငျ​စား​နပွေီး ဘာစီလိုနာအသငျး ကလညျး ပွနျ​လညျ​ကမျးလှမျး လာနိုငျ​တယျ​လို့သိရပါတယျ​။
တရုတျ​စူပါလိဂျ​ကလပျ​ Tianjin Quanjianအသငျးဟာ အသငျး​ခေါငျး​ဆောငျ​ အငျ​နီ​ယစေတာ ကို ​ချေါယူရနျ​သတငျးမြားထှကျ​​နမေူ ကို ငွငျးဆိုသှား ခဲ့ပါတယျ​။သတငျးအမှား​တှလေို့ အတညျ​ပွု ​ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
အသငျး​ခေါငျး​ဆောငျ​ အငျ​နီ​ယစေတာ ဟာ ခြဲလျ​ဆီး အသငျးနှငျ့​ ယှဉျ​ပွိုငျ​မယျ့​ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ပှဲစဉျ​ကို ပွနျ​လညျ​ပါဝငျ​နိုငျ​​ခွရှေိ​နပေါတယျ​။ အသငျးနှငျ့​အတူ ပွနျ​လညျ​ပူး​ပေါငျး ​လကေ့ငျြ့​​နတေယျ​လို့သိရပါတယျ​။ကွံခိုငျ​မူပွညျ့​ဝမူ ရှိမရှိ​ကို​တော့ထုတျ​ပွနျ​ထားခွငျး မရှိ​သေးပါဘူး။
ဘရာဇီး ကစားသမား​တှဖွေဈ​တဲ့ ​ကျော​တငျ​ဟို ဟာ ပီအကျ​ဂြီ တျိုကျ​စဈ​မူး ​နမော အ​နနေဲ ဘာကာ ကို ပွနျ​လညျ​ကစားမညျ​ဆိုပါက ကွိုဆို​ကွောငျး​ပွောကွားဆိုခဲ့ပါတယျ​။ရာကီတဈ​ကလညျး ​နမောအတှကျ​ အမွဲလမျးဖှငျ့​ထားတယျ​လို့​ပွောဆိုခဲ့ဖူးပါတယျ​။
ဘာစီလိုနာအသငျး ​နောကျ​ခံလူ ပီ​ကေး ဟာ လာမယျ့​ ချြ​လျ​ဆီးအသငျးနှငျ့​ ပှဲစဉျ​ဟာ သူ့ ရဲ့ ဥ​ရောပပွိုငျ​ပှဲ​ပေါငျး၁၀၀ပွညျ့​မွောကျ​မယျ့​ပှဲစဉျ​ဖွဈ​တာမို့ သူ့ အအတှကျ​ အမှတျ​တရ ​တှေ ရယူနိုငျ​မလား​စောငျ့​ကွညျ့​ရ​တော့မှာပါ။